Sida WhatsApp loogu helo Apple Watch | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Barnaamijyada IPhone, Apple Watch
Sugitaanka in la isticmaalo WhatsApp-ka Apple Watch-ka ayaa u muuqda mid aan dhammaad lahayn. Midna xitaa ma xasuusto markii Telegram uu bilaabay codsigiisa Apple Watch, iyo Si kastaba ha noqotee, codsiga ugu muhiimsan ee fariimaha degdegga ah ee adduunka ayaa diidaya inuu haysto nooc loo isticmaali karo saacadda Apple.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan sugitaanku waxay leeyihiin dhammaad, xitaa haddii aysan si rasmi ah ahayn, waxaan horeyba u helnay xal aan ku isticmaali karno WhatsApp-ka Apple Watch. Waxaan tijaabinay WhatchUp, oo ah codsi kuu ogolaanaya inaad aqriso fariimaha, daawato sawirada iyo inaad farriimaha WhatsApp ka soo dirto Apple Watch-kaaga. Fiidiyowgaan waxaan ku tusaynaa sida loo qaabeeyo loona isticmaalo codsigan.
Waa codsi la bixiyay, laakiin hubaal in badan oo ka mid ah waxay magdhow siisaa awood u siinta WhatsApp-ka Apple Watch-ka. Ma laha khiyaano ama khiyaano, waxa ay qabato waxay ku rakibtaa WhatsApp Web-ka saacaddaada, iyadoo lagaa baarayo QR code iyo wax kasta oo ka dhigaya inay shaqeyso. Qaabeynta ayaa ah mid aan cakiranayn ka dib tilmaamaha lagu muujiyey arjiga iyo saacadda, sida aan ku muujinno fiidiyowga.
Marka la qaabeeyo, isticmaalkeedu waa mid dareen leh. Waxaad awoodi doontaa inaad marin u hesho dhammaan wada sheekaysiga aad ku leedahay WhatsApp, inkasta oo haddii qaarkood ay ku jiraan farriimo badan, laga yaabee inaan si buuxda loo muujin. Runtii maahan dib udhac, maadaama aan shaki kujiro in qofkasta naftiisa u hurayo raadinta farriimaha Apple Watch. Codsiga shaqadiisa si fiican ayuu u qabtaa: waxaad arki kartaa farriimaha, oo ay ku jiraan sawirrada, waxaadna u diri kartaa farriimo adoo ku qoraya cod, qoraal gacmeed, ama emojis. Sideedaba, haddii aad dhibaatooyin ku qabtid luqadda, laga bilaabo arjiga waxay kuu sheegayaan sida loo beddelo kan aad rabto. Inta aan sugeyno barnaamijka rasmiga ah inuu ku yimaado Apple Watch, tani waa xalka wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida WhatsApp loogu helo Apple Watch
Abku wali wuxuu kujiraa bakhaarka barnaamijka, maqaalka aan aqriyay maahan
Waa run. Qiimuhu waa 2,29 XNUMX.
Noocyada noocan ah ee codsiyada ma yihiin kuwo aamin ah
Waxay siiyaan 2,4 ka mid ah 4tii
Waxaad dhahdaa codsigu wakhti buu qaadanayaa si aad uhesho saacada laakiin waad ilaawaysaa inaysan xitaa lahayn App ipad ama PC. Shaki la'aan whatsapp-ka waxaa adeegsada adeegsigiisa saldhiga ma ahan tayadiisa, taasna horeyba waa telegram.
Ma iskaan doono qr code
Ku jawaab jovi
Waxay ku kacdaa shaqo laakiin wuu aqriyaa isagoo ka fogeynaya wax yar oo ka badan koontada
Waxaan arkaa inay jirto bedel kale oo la yiraahdo whatschat, ma ogi haddii qof isku dayay labada ikhtiyaar oo midka si fiican u shaqeyn doona, waxaan hayaa ilaalo hada oo aan u aado qeybta labaad ma xuma
Waan rakibay, laakiin dhibaatooyin badan ayay leedahay, way kala goysaa oo sheekooyinka saacadda laguma cusbooneysiiyo (Apple Watch 3), inaad ku xirnaato mararka qaarkood ma xirna, sidaas darteed waan soo celiyey oo waxaan codsaday in lagu soo celiyo tufaaxa. Iyaguna mar hore ayey iga dhigeen soo noqoshada, mahadsanid !!!
Ma haysataa ikhtiyaar aad si toos ah ugu soo dirto cajalladaha? Ma doonayo kelitalisnimo, oo haddii aad sidoo kale dhegeysan karto cajaladaha saacadda laga daawado, ma jiraa qof horeyba arrintaas u tijaabiyay? Mahadsanid!
Ku jawaab francin
Sidee u codsatay lacag celin maxaa sababo ah oo aad sheegtay?
Ma sameyn karo taas
Waxaad galaysaa hache waxaad heleysaa bartaas xiidanka weyn ee loo yaqaan 'bar bar reportaproblem dot apple dot com' (waxaan dhihi karaa sidan oo kale maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in isku xirnaanta dhabta ah ay mamnuuc tahay, in kasta oo aad rasmi tahay midna ma ahan inay noqoto)
ka dib waad gasho, raadi abka aad rabto inaad soo laabato oo fur furad-hoosaadka oranaya dhowr ikhtiyaar, dooro midka sheegaya inaad rabto inaad kusoo celiso barnaamijka iyo voila. (waxaad haysataa 14 maalmood oo aad ku soo noqoto)
Waa wax xun Ma shaqeyneyso. Had iyo jeer wuu jaraan, isma waafajiyo ... qashin
Ma shaqeyneyso, ha iibsan, kumana rakibayso dhammaan Apple Watch, sidaa darteed xiriir ma leh. Macluumaad aan dhameystirneyn
Ku jawaab Claudiocsv
Faallo sax ah oo ballaadhan: Khudbad-qaadiddii ka dib, waxaan adeegsaday habka fudud ee aan dib ugu kiciyay iPhone-ka halkaasna waa lagu rakibay oo wuxuu ka muuqanayaa Apple Watch.
Waxaan isku dayay ilaalin iyo waardiye waxaanan dhihi karaa kan ugu dambeeya ayaa sifiican ushaqeeya horumariyahana si joogto ah ayuu ugu cusbooneysiiyaa horumar
Ilaa racfaan aan akhriyey
Ku jawaab RAE
Waxaa loo yaqaan "errata." Aad baad u mahadsantahay, waan saxay.
Apple waxay siisaa qiimo dhimis 50% shaqaalaha iibsada HomePod
Uma baahnin inaan sugno waqti dheer, YouTube TV ayaa hadda loo heli karaa Apple TV